Ugh. Mampalahelo tokoa fa, aorian'izay, mbola manana olona vitsivitsy any amin'ny toeram-piasana ihany isika manala ny fahaizana hiarahan'ny mpiasa miasa, mikaroka ary manatsara ny famokarany. Ny tsy fanekena ny zava-misy fa, amin'ny alàlan'ny tamba-jotra sosialy, azonao atao ny miditra amin'ireo namana, matihanina, mpivarotra ary manam-pahaizana dia tsy mahamenatra ankehitriny. Ary raha tsy manana mpiasa tsy maintsy mamela ny finday finday avo lenta ao anaty fiarany ianao dia mahazo miditra amin'ny media sosialy. Raha manararaotra izany izy ireo, ny valiny dia tsy ny fanakanana ny fidiran'ny tsirairay… ny valiny dia ny fandroahana ilay mpiasa.
9 Jiona 2013 à 11:30
Douglas, mahafinaritra izany! Nitady lahatsoratra misy spin media sosialy ho an'ny lahatsoratra bilaogy HR 4 isan-kerinandro aho (ireo tiako indrindra amin'ny herinandro) ary azo antoka fa hampiditra ity iray ity. Misaotra nizara ny vaovao.